Naịjirịa Agaghị Agbaji, TB Joshua, Pro-Biafra, Yoruba Agitators Na-ewe Iwe
TB Joshua, onye nkwusa ozioma nke TV nke Nigeria, kwenyere na mba a ga-ad n’otu n’etiti ndi n’adighi nchebe n’uwa di iche iche.
Joshua, onye nkwusa nke a katọrọ amụma ya na nso nso a, kwuru okwu na ụka ya na Sọnde. O gosiri vidiyo nke amụma o buru banyere Naịjirịa n'afọ 2014.
Onye ụkọchukwu ahụ kwurịtara banyere ọgba aghara nke Naịjirịa ugbu a, bụ nke kpalitere COVID-19 na ọgba aghara n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, ma jikọta ya na amụma 2014.
“Naịjirịa mara mma n’èzí nsogbu a,” ka ọ na-ekwu.
“Ekpere gị ugbu a bụ ka ị gbaa akaebe ya ka ọdachi a ghara iburu gị ruo mgbe ebighi ebi,” ka ụkọchukwu ahụ kwuru n'ekpere n'oge ọ na -eme emume na Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN).
"Edeela iwu na a ga-ahọta obodo a dịka mba siri ike."
Dị ka Joshua si kwuo, ndị isi ga-aza ajụjụ maka ọrụ ha na nsogbu ahụ.
O kwuru, sị, "Nnukwu nsogbu na-abịa, na ọ nweghị mmadụ ga-enwe ike ịlanarị ya belụsọ ma ị nwere aka na ya." Naijiria ekpuchiri na ndò shadow Nigeria na-ejupu n'ime oke ọgba aghara, ogbugbu, ịgba égbè, na mbibi. Igwe ojii ga-agabiga, mana Naịjirịa agaghị aga. Ike na enweghị udo enweghị isi… …zọ ị ga-esi jiri ike gị mee ihe ga-ekpebi ma udo ọ dị ma ọ bụ na ọ nweghị.
"Ike dị n'obi, ọ bụghị ebe nchekwa akụ, White House, ma ọ bụ Aso Rock." Ọ bụrụ na ibi na White House na-enweghị njikwa n'ime obi gị, ị bi n'oké ọhịa. Enwere m ike ikwe gị nkwa na onweghị ihe ga-eme Naịjirịa. Nigeria ga-abụ mba! ”
“Ha abatawo ebe niile,” Joshua kwuru na mmeghachi omume nke ọgba aghara na iyi ọha egwu na-akpata. Enweghị otu ngalaba ma ọ bụ ngalaba na mba a ebe ndị a na-anọghị. Ọ ghọọ ọrụ ọkachamara. Ọ dịghị onye ọ bụla nwere nchebe pụọ na ike, n'ike, na egbe ma ọ gwụla ma ndị Chineke na-echebe - n'ihi na ha wakporo ebe niile. Anabataghị ha n’ime ọhịa; ha nọ ebe niile. ”
Na nzaghachi nke ọgbaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ahụ, Joshua kwuru, “A ga-enwe azịza ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ; site n'itinye ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha n'akụkụ ma tụlee ịdị n'otu nke mba a. ”
"Aga m ekwu ya ọzọ: nchebe, ndị uwe ojii, ngwá agha, na ndị agha enweghị ike ichebe onye ọ bụla ọzọ n'ihi na ihe niile abanyela."
Akyiri yi, me ne me yere, Yosua de yɛn kɔɔ YouTube. Mgbe otu òtù na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ tụlere ma ọ dịkarịa ala ihe ndekọ asaa e tinyere na teepụ, ha gbara akwụkwọ n'ụlọikpe na-egosi na onye nkwusa ahụ na-ekpe ekpere iji “gwọọ” ndị nwere mmasị nwoke.
Amụma ahụ enwetala ọtụtụ mkpuchi na mgbasa ozi mmekọrịta, yana TB Joshua bụ otu n'ime ọnọdụ ndị kachasị nso na Twitter.
Ọtụtụ ndị na-akwado Bịafra na-ewe iwe maka amụma ndị ahụ. Ọtụtụ ndị Naịjirịa zara na nke ya.
"TB Joshua buru amụma na Nigeria agaghị etisa," ka MBrown dere na Twitter. Nke a na-abịa site n'aka otu onye amụma ahụ were kamera na ndị otu mgbasa ozi gaa n'ọzara ọnụ ya n'afọ gara aga. Ekwuru na enwere ike iwepu Coronavirus tupu ọnwa Mee afọ 2020, nke ghọrọ adịgboroja. Gbaa mbọ hụ na mmadụ niile nwere onwe ha. ”
Joshua tara ahụhụ n'ọtụtụ ebe mgbe amụma ya kwuru na oria coronavirus ga-akwụsị na Machị 27, 2020, emezughị.
Ọnwa ole na ole ka nke ahụ gasịrị, nje ahụ na-egbu mmadụ ka na-ebibi ọtụtụ mba, yana ọkwa nke abụọ nke ọrịa ọhụụ na-eweta akụkọ.
'O siri ike imebi Nigeria karịa idozi ya' April 21, 2021
Enwere m ike, ma anaghị m ada mbà - Kelechi Iheanacho Nwere ike 12, 2021
"Ime ihe ike agaghị edozi nsogbu obodo" - otu Igbo katọrọ IPOB June 6, 2021
EFCC anaghi ejide m maka ihe iri ngo $ 350,000 - Akpabio April 25, 2021